လားရှိုး ရိုးမဘဏ် ဗုံးပေါက်မှုမှ ဒဏ်ရာရသူများ အနက် ၁၆ ဦး ဆေးရုံမှ ဆင်း - Yangon Media Group
လားရှိုး ရိုးမဘဏ် ဗုံးပေါက်မှုမှ ဒဏ်ရာရသူများ အနက် ၁၆ ဦး ဆေးရုံမှ ဆင်း
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂
ရိုးမဘဏ်ခွဲတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများ အနက် ၁၆ ဦးမှာ ဆေးရုံမှဆင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ လားရှိုးမြို့ လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ထားကြောင်းသိရသည်။ လားရှိုးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီးဝင်းဆွေက ”လားရှိုးမြို့ကို လုံခြုံရေးအနေနဲ့ လှည့်ကင်းတွေ၊ ရပ်ကင်းတွေ၊ ပိတ်ဆို့ နေရာတွေသတ်မှတ်ပြီးတော့ အဲဒီ နေရာတွေမှာ အချိန်ပြည့် ၂၄ နာရီစိုးမိုးထားပါတယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က ပြောသည်။
ယင်းပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သဲလွန်စရရှိရေးအတွက် ဖော်ထုတ်နေကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ”ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အခင်းဖြစ်နေရာတွေကိုတော့ စစ် ဆေးဆောင်ရွက်နေလို့ လုံခြုံရေးရှိတယ်။ နောက်ဆုံးဆေးရုံတက်တဲ့ လူနာကျန်တာကတော့ အမျိုးသား လေးဦး၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကျန်တာရှိတယ်။ သေဆုံးသူထပ်တိုးတာမရှိ သေးဘူး”ဟု ဒုတိယရဲမှူးကြီး ဝင်းဆွေက ပြောသည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၂၁ ဦးအနက် ၁၆ ဦးမှာ ဆေးရုံမှဆင်းသွားပြီဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် လားရှိုးမြို့အခြေအနေမှာ မြို့သူ၊ မြို့ သားများ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိ သော်လည်း ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရိုးမဘဏ်ခွဲကို ယာယီပိတ်ထားကြောင်း၊ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား ရာနေရာနှင့်ကပ်လျက် ဧရာဝတီဘဏ်သည်လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ယာယီရပ်နားကာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ လားရှိုးမြို့ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် လားရှိုးမြို့တော်ခန်းမအနီး လမ်းမတော်လမ်းနှင့် ရွှေဘိုလမ်း ထောင့်ရှိ ရိုးမဘဏ်ခွဲ(၁)တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက် ညနေ ၄ နာရီ မိနစ် ၄ဝ ခန့်က ပြင်းထန်သည့်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရိုးမဘဏ်အဆောက်အအုံအတွင်း ပိုင်းတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက် အအုံများတွင်လည်းပျက်စီးခဲ့ ကြောင်း၊ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရိုးမဘဏ်ခွဲမှဝန်ထမ်း မစန္ဒာထွန်း(၄၈) နှစ်နှင့် မမော်မော်(၃၉)နှစ်တို့နှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းပေါက်ကွဲမှုကို အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ(စိစစ်ဆဲ) အဖွဲ့မှပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟု တပ်မ တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်းဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လာရှိုးမြို့မရဲစခန်းမှ (ပ) ၆၅/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ- ၃ဝ၂/၃ဝ၇/၂၈၆/၃၂၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။
ရန်ကုန်စည်ပင် ဥပဒေတွင် မြို့တော်ဝန်ကို ပြည်သူက တိုက်ရိုက် တင်မြှောက်ရန် အပါအဝင် ထည့်သွင်း??
FDA မှ ဒုတိယ ကြီးကြပ်ရေးမှူးကို အဓမ္မကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သူအား ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးရန် အရှေ့ ပိုင်
ကျိုင်းလပ်မြို့၌ မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် ကွန်ကရစ်တံတား ချဉ်းကပ်လမ်း ပျက်စီး၊ ယာဉ်
ယူအေအီးနိုင်ငံ အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တောင်ကိုရီးယားသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်?
ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်တွင် အကျိုးအမြတ် ပိုရသည့် နဂါးမောက်ပင်နှင့် လျှော်ဖြူပင်များ အဓိ
မောင်တောဖြစ်စဉ် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများသို့ပျံ့နှံ့နိုင်ရေး သီးခြား ဆောင်ရွက်မည်ဟု ပြည်ထော?
ဆွာချောင်း တံတားတိုင်အခြေ ရေအောက်ဂလိုင် ၄ ဒသမ ၂ မီတာ(၁၄ ပေနီးပါးခန့်) ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းအား ဆက်?
မြန်မာ့ပထမဆုံး 3D ရုပ်ရှင် “ကြီးမြတ်သောမြန်မာ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီရုံတင်မည်
သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်၏ ဖော်ပြချက်မှာ မမှန်ကန်ဟု ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ငြင်းဆို
ဆီးချိုရောဂါရှင်များနှင့် အဝလွန်သူများ ထမင်းအစားထိုး အာဟာရမှုန့် စားခြင်းဖြင့် သွေးတွင်း အ